Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံက RCEP သဘောတူညီချက်တွင် တရားဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးပြော
စင်ကာပူနိုင်ငံ Pasir Panjang ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းတွင် ကွန်တိန်နာများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Economy
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချို့ကလည်း ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်သောနိုင်ငံများအနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် သတ်မှတ်ချက်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း အမျိုးသားဥပဒေပြု နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးနှင့် တွဲလျက်ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေး၌ ဝမ်က သတင်းထောက်များကို ပြောခဲ့သည်။
အတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးထားသော အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ခြောက်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သော နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံတို့သည် သဘောတူညီချက် ရောက်ရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း နှင့် သဘောတူညီချက် အကောင်အထည်ပေါ်လေ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်သော RCEP အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလလယ်ပိုင်းက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံနှင့် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရိးယား၊ ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန် စသည့်နိုင်ငံများက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, March 8 (Xinhua) -- The Chinese government has officially ratified the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement, Minister of Commerce Wang Wentao said Monday.
The RCEP, the world's largest free trade agreement, was signed in mid-November 2020 by 10 ASEAN member countries and China, Japan, the Republic Of Korea, Australia and New Zealand. ■